RASMI: Kooxda Real Madrid oo xaqiijisay in mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah uusan u ciyaari doonin kulanka caawa – Gool FM
(Madrid) 26 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xaqiijisay in xiddigeeda muhiimka ah ee Marcelo uusan ka qeyb qaadan doonin kulanka caawa ee horyaalka La Liga.
Los Blancos ayaa ku dhawaaqday goordhow in Marcelo laga saaray daqiiqaddii ugu dambeysay shaxda kooxda Real Madrid ee caawa wajahaya Real Betis, sababo la xiriira dhabar xanuun.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ayaan kooxda Real Madrid ula safri doonin Magaalada Seville, halkaasoo ay caawa kula soo dheelayaan naadiga Real Betis.
Bayaan ka soo baxay kooxda ka dhisan caasimadda Spain oo lagu daabacay Website-keeda rasmiga ah ayaa u dhignaa: “Marcelo lama safri doono shaxda Real Madrid ee u safraya Seville halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan Betis kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
“Xiddiga reer Brazil ayaa ku jiray liiska 22-ka ciyaaryahan ee uu Zinedine Zidane u magacaabay kulankan, laakiin waxaa laga saaray liiska daqiiqaddii ugu dambeysay kaddib markii uu raaxo la’aan ka dareemay dhabarkiisa.”
Halkee ayuu marayaa heshiiskii ay kooxda Inter Milan ku dooneysay N'Golo Kanté??